Kordhinta Xisaabaadka Iibiyaha Iibiyaha - Aplus Global Ecommerce
Kordhinta Iibinta ee ganacsiga e-commerce waa ciyaar kubadeed gabi ahaanba ka duwan tan ganacsiga qadka ka baxsan. Laga soo bilaabo jawaab celinta macaamiisha hufan oo dhab ah lahaanshaha sanduuqa iibsiga, waxaa jira dhinacyo kala duwan oo suuqgeynta internetka ah oo aad u dhib badan. Intaa waxaa sii dheer, loolanka adag ee ka imanaya meheradaha cusub ee soo ifbaxaya ayaa waddadan ka dhigaya mid khatar badan. Astaamaha firfircoon ee suuqyada internetka ayaa dalbanaya habab cusub oo hal abuur leh si koritaan joogto ah loogu helo iibka. Intaas waxaa sii dheer, sharciyada aagga ganacsiga elektaroonigga ah waxay ku sii beddelayaan tikniyoolajiyadda ugu cusub iyo macaamiisha si dhakhso leh u ballaarisa Sababahan oo dhan awgood ganacsiyada inta badan waxay u baahan yihiin taageero si kor loogu qaado iibka loona sameeyo macaash
Istaraatiijiyadda iibka iyo suuqgeynta ee Aplus Global Ecommerce waxay karti u leeyihiin kor u qaadista iibinta shirkado badan oo e-commerce ah sannadihii ay khibradaha u lahaayeen duurka. Waxaan ka caawinnaa xisaabaadka Amazon inay kordhiyaan iibka iyagoo ka caawinaya dhinacyadan:
Ku guuleysiga sanduuqa iibsiga
Waxyaabaha Bogga Badeecadda ku habboon
Qiimo iyo qiimo dhimis
Meelahaani waa waxyaabaha ugu waaweyn ee go'aamiya iibka meherad. Xakamaynta arimahan waxay cadeyn karaan inay yihiin aalad awood leh oo lagu xakameeyo iibinta sidoo kale.